Amapaki ama-5 angenakuphunyukwa asemadolobheni eSpain Izindaba Zokuhamba
Amapaki ama-5 angenakuphunyukwa asemadolobheni eSpain
Intwasahlobo yisikhathi esihle sokujabulela ukuhamba emapaki asemadolobheni amadolobha ethu. Zimelela iphaphu eliluhlaza okwaningi lazo futhi zisinikeza izindawo zokuthula ukuze sibalekele ukuphithizela kosuku nosuku, hhayi kuphela ngokucabanga ngezimila nezilwane zazo kodwa nokushiswa yilanga, ukuba nepikinikini, ukuzijwayeza ezemidlalo, njll. Ngezansi uzothola amanye amapaki amahle kakhulu asedolobheni eSpain.
1 Ipaki enhle yomhlalaphansi
2 IMaria Luisa Park eSeville
3 Ingadi yaseTuria eValencia
4 IHorta Labyrinth Park
5 I-Alameda Park eSantiago de Compostela
Ipaki enhle yomhlalaphansi
Uma wake waya eMadrid mhlawumbe uye epaki i-El Retiro ukuyokuhamba ngezinyawo, uphuze emathafeni alo amahle futhi uthathe izithombe. Ngamahektha angama-125 nezihlahla ezingaphezu kwezi-15.000, ipaki i-El Retiro laqala ngekhulu leshumi nesikhombisa lapho ukusebenza kweNkosi u-Felipe IV, u-Count-Duke wase-Olivares, kunika inkosi indawo ethile yokuthokozela umndeni wasebukhosini. Kuze kwaba yi-Glorious Revolution yango-1868 lapho ipaki yaseRetiro yaba impahla kamasipala futhi yavulelwa zonke izakhamizi.
Namuhla ingenye yezindawo zabavakashi ezifanekisela kakhulu eMphakathini waseMadrid. Izindawo zalo ezigqame kakhulu yilezi: ichibi, isigodlo se-crystal, isigodlo saseVelázquez, ingadi yaseVivace, izingadi kanye nensimu yama-rose kaCecilio Rodríguez, izingadi zomakhi uHerrero Palacios neFrance Parterre neCiprés Calvo, isihlahla esidala kunazo zonke eMadrid yemvelaphi yaseMexico okuthiwa ineminyaka engaba ngu-400 ubudala.
IMaria Luisa Park eSeville
Enye yezindawo eziyizifanekiselo kunazo zonke eSeville yiParque de María Luisa, imvelaphi yayo ingatholakala ezingadini ezazizungeze isigodlo esidala saseSan Telmo. Umhlaba wanikelwa ngo-1893 yi-Infanta María Luisa de Borbón edolobheni futhi wavulwa njengepaki yomphakathi ngo-Ephreli 18, 1914 enegama le-Infanta María Luisa Fernanda Urban Park.
Yalungiswa ngunjiniyela waseFrance uJean-Claude Nicolas Fourestier, umgcini wehlathi laseBoulogne eParis, owanikeza ukuthintana kothando okukhuthazwe izingadi zeGeneralife, i-Alhambra kanye ne-Alcázares yaseSeville.
I-axis emaphakathi yeMaría Luisa Park yakhiwe yiNtaba iGurugú, Umthombo Wezingonyama, i-Isleta de los Patos, iLond Pond kanye ne-Bécquer roundabout, enikelwe imbongi uGustavo Adólfo Bécquer, lapho kanye nokugqashuka kuka imbongi, ithuthukisa indikimba yothando.
IMaría Luisa Park ingelinye lamagugu emvelo aseSeville lapho singabona khona izilwane zasemadolobheni kusuka enhlokodolobha yaseSeville njengamadada, ama-swans noma amapigogo.
Ingadi yaseTuria eValencia
Leli paki elisemadolobheni elingamahektare angu-110 lingenye yamapaki avakashelwa kakhulu eSpain. Inomsuka wayo ngo-1986, lapho isikhukhula saveza indawo engenalutho eyayisetshenziselwa ukuzilibazisa kwamaValencians. IGarden Turia nayo ikhawulwe yiBioparc, iDolobha le-avant-garde City of Arts and Sciences, iGulliver Park, iPalau de la Música neCabecera Park.
IHorta Labyrinth Park
IHorta Labyrinth Park iyona endala kunazo zonke eBarcelona futhi itholakala emaphethelweni edolobha, phansi kwentaba iCollserola kude nesiphithiphithi sabavakashi ezungeze iCiudad Condal. Yakhiwe ngengadi ye-neoclassical, eyothando, kanye ne-maze ye-cypress ekhangayo, konke kuhlotshiswe ngezithombe ezinemiqondo yezinganekwane.
Leli paki linomsuka wangasese, ngoba ekupheleni kwekhulu le-1967 leli pulazi kwakungelomndeni wakwaDesvalls. Kuwo wonke ama-XNUMXth century, izandiso zenziwa, zafinyelela kumahektha angaphezu kwesishiyagalolunye wobuso manje okukhona. Ngo-XNUMX abakwa-Desvalls banikeza ipaki nesigodlo uMkhandlu Wedolobha laseBarcelona.
Kufanele ukhokhele ukungena ukuze ufinyelele kodwa kumahhala ezinganeni, ezingasebenzi nasemhlalaphansi kanye nakuzo zonke izethameli ngoLwesithathu nangeSonto. Kulezi zimo, njengasePark Güell, umnyango usalawulwa, ngoba umthamo ovunyelwe kakhulu ngabantu abangama-750 ukuze kugcinwe ipaki ngaphansi kwezimo ezifanele.
I-Alameda Park eSantiago de Compostela
Eyaziwa ngokuthi yiLa Alameda, leli paki elisemadolobheni eliseSantiago de Compostela lakhiwa izingxenye ezintathu ezihlukene: iPaseo de la Alameda, iCarballeira de Santa Susana nePaseo de la Herradura.
Indawo yayo inenhlanhla futhi ngokuhamba kwesikhathi yaba yinsimu enkulu yasedolobheni, futhi yaqokonyiswa yizinhlobonhlobo zezimbali zayo (i-oki, u-eucalyptus noma i-chestnut yamahhashi). Izakhiwo zalo zekhulu leshumi nesishiyagalolunye, izakhiwo zesimanjemanje, kanye nezithombe zayo ezibaziwe, nazo ziyamangaza kakhulu.
Zonke izintelezi ze-Alameda Park zenza ukuthi, kusukela ngekhulu le-XNUMX, indawo ebaluleke kakhulu ekubhekisweni kuyo abantu baseSantiago, ebonakala ngokuba yindawo yokwamukela nokuphumula.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » Spain amadolobha » Amapaki ama-5 angenakuphunyukwa asemadolobheni eSpain
IVenice, ethenga edolobheni lemisele
Okufanele ukwazi uma uhambela e-Austria kuleli hlobo